Wasiirka Amniga oo sheegay in la soo qabtay saraakiil iyo ciidamo ku lug lahaa dilkii Guddoomiyaha D/Hodan +(VIDEO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiirka Amniga oo sheegay in la soo qabtay saraakiil iyo ciidamo ku...
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Amniga gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu hayo saraakiishii iyo ciidankii ku lugta lahaa dilka Guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiim Dhegajuun.
Wasiiru Dowlaha Aminga Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farxaan Cali Axmed oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa shacabka Soomaaliyeed u caddeeyey in gacanta lagu dhigay saraakishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilkii Allaha u naxariiste Guddoomiyii Degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise (Dhegajuun), kuwaasi oo ku jira gacanta ciidamada dambi baarista ee CID.
Farxaan Cali Axmed ayaa bulshada uga tacsiyadeeyay falka dilka ah ee loo geystay guddoomiyihii degmada Hodan.
“Saraakiishii iyo ciidamadii ku lugta lahaa dilka Allaha u naxariiste Guddoomiyihii Degmada Hodan gacanta ayaa lagu dhigay, baaris ayaana ku socoto, waxaa kaloo lagu raad joogaa dad kale oo falkaasi ku lugta lahaa” ayuu yiri Wasiiru dowlaha Amniga gudaha XFS Farxaan Cali Axmed.
Ugu dambeyn, wasiiru dowlaha Amniga mudane Farxaan Cali Axmed ayaa shacabka ka codsaday inay is dajiyaan oo ay ku kalsoonaadaan dowladooda.
ciidamada dambi baarista ee CID
Guddoomiyihii degmada Hodan